प्रधानन्यायाधिसलाई पत्र : देशले खोजेको हिरो बन्नुहोस्-NepalKanoon.com
प्रधानन्यायाधिसलाई पत्र : देशले खोजेको हिरो बन्नुहोस्
माननिय प्रधानन्यायधिस ज्यू,
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको गरिमामय चौथो उच्च राजकीय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा म एउटा असल नागरिकको हैसियतले तपाईलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईको सफल कार्यकालको कामना गर्दछु ।
प्रकृतिले मानिसलाई कुनै न कुनै रुपमा असल काम गर्नसक्ने क्षमता दिएको हुन्छ । मानसिक रुपले स्वस्थ हरेक व्यक्तिको जीवनमा मानवकल्याणको लागि योगदान गर्ने अवसर प्राप्त छ । उच्च
जिम्वेवारी र भूमिका भएका नागरिकले त यसप्रकारको अवसरको सदुपयोगमात्र गरिदिंदा पनि लाखौंजनको कल्याण हुन्छ । नेपालको २३ औं प्रधानन्याधिसको रुपमा ‘‘सर्वोच्च न्यायमुर्ती’’ को स्थानमा रहेर तपाईले ३ करोड नेपालीको कल्याण गर्ने महान् अवसर पाउनुभएको छ । तपाई गणतन्त्र नेपालको भाग्यमानी नागरिक हुनुहुन्छ ।
श्रीमान्बाट दशबजे नै पेसी तोकी काम कारवाही शुरु गरिएको समाचार बाहिर आएको छ । संसदीय सुनुवाई र सपथग्रहणको समय आसपास तपाईबाट गरिएका प्रतिबद्धता निकै उत्साप्रद छन् ।
भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको पक्षमा हालसम्म न्यायालयबाट भएको फैसलाहरु करिब सत्प्रतिशत निर्विवाद छन् । तर अन्य मुद्दामामिलाको सन्दर्भमा हाम्रो अदालती प्रक्रिया वा अनियमितताको कारण सर्वसाधारण जनताले ठूलो सास्ती व्यहोरीरहेको पीडा पनि उत्तिकै सत्य कुरा हो । अब न्यायालयको आवश्यक सुदृढीकरण होस् र असल शासनको वास्तविक थालनी न्यायालयबाटै होस् ।
न्यायपालिका वा न्यायालयको बारेका कुनै पनि किसिमका टिप्पणी गर्दा कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह राखिनु नहुने सामान्य सिद्धान्तभित्रै रहेर म यस पत्रमार्फत श्रीमान् समक्ष एउटा असल नागरिकको तर्फबाट हामी नेपालीहरु अन्यायमा परेको र पारिएका निम्न सन्दर्भहरु अवगत गराउन चाहन्छु ।
१) न्याय पाउने आशले अदालत पुगेका सोझा जनताहरु बर्षौंसम्म मुद्दाको फैसला नगरिएका कारण न्यायालयबाटै अन्यायको शिकार हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान् छ ।
२) पहुँच हुनेहरुको लागि साँझ वा राती सम्म अदालती काम कारवाही हुने र पहुँचवालाको सुविधाअनुरुप पेसी तोकिएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
३) निवेदकले न्याय पाउन नसक्ने गरी म्याद गुजारी फैसला गरिएका उदाहरणहरु छन् जसले न्यायालयको विश्वसनीयतामा औंला ठड्याउनेहरुलाई बल प्रदान गरेको छ । न्यायालय को विश्वसनीयता स्खलीत हँुदा हामी जनता थप अन्यायमा पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
४) न्यायाधिस नियुक्ति गर्ने पक्रिया निष्क्रिय पारी न्यायालयलाई खाली गराउन न्यायमुर्ती हरुकै अप्रत्यक्ष भूमिकामा देखिएको धेरै समय बितेको छैन । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टहरुलाई खेदिएको छ । यसप्रकारका प्रवृत्तिले न्यायालयलाई थप कमजोर पारिरहेको छ । अन्ततः यसको परिणाम पनि हामी सेवाग्राही जनताले नै भोग्नुपर्ने छ ।
५) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित फैसला भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई दाउमा राखिएको धेरै समय बितेको छैन । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणले भविश्यमा न्यायालयमार्फत नै कतिपय राजनीतिक फैसला हुनसक्ने संकेत गरेको छ । यसले लोकतन्त्रको चीरहरण गर्नेछ , अस्थिरता निम्ताउने छ र गैरन्यायिक हर्कतमा वृद्धि हुनेछ ।
६) देशमा चौतर्फी अराजकता छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको सट्टा सत्ता र शक्तिको दम्भ प्रयोग गरी अदालतलाई चुनौती दिन थालिएको छ । अदालतबाट अपराधी घोषित भएका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति छ । प्रहरीभित्रै अन्यायपूर्ण बढुवाका कारण भद्रगोल सृजना भएको छ । न्यायका लागि अदालत पुगेका पीडित डीआइजीहरुको पक्षमा भएको फैसला कायान्वयन गर्नुको साटो सरकार र स्वयं प्रहरी प्रमूख पुनरावलोकनको लागि अदालत पुगेका छन् । पहिले खोटो बढुवा गरेको जग जाहेर छ । फेरी खोटो मनाशय छ अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सट्टा बढुवा रोकीपाउँ भन्ने । यो भनेको अदालतलाई प्रयोग गरी निमुखाको घाँटी निमोठ्ने प्रवृत्ति हो ।
माथि उल्लेखित प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भहरुको गहिराई खोतली श्रीमान्बाट न्यायिक सुधारको थालनी हुने हो भने हामी ठोकुवाको साथ भन्न सक्छौं–आगामी ९ महिना भित्रै यो देशले खोजेको असली हिरो तपाई नै बन्नुहुनेछ ।
भनिन्छ राजनीति भ्रष्ट भयो भने जनताले तह लगाउँछन् । तर यो प्रक्रिया लामो छ र हाम्रो जस्तो मतदाताको चेतनास्तर भएको देशमा त अनिश्चित नै छ । यसकारण अदालतले समयमा नै तह लगाए देशले कम क्षति व्यहोर्नुपर्छ । तर अदालतनै भ्रष्ट भयो भने …… यसको परिणती डरलाग्दो हुन्छ । अराजकता, विग्रह, असन्तुष्टि र अस्थिरता उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले होला ससांरभरी न्यायालयको अगाडि विशेषण झुण्डाइएकोे हुन्छ ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ । न्यायालयले आफ्नो गरिमा कायम राख्नै पर्दछ । हाम्रो न्यायालयबाट पेसी र फैसला किनबेच भएका हल्लाहरु प्रशस्त बाहिर आएका छन् । श्रीमान् पनि यो विषयप्रति संवेदनशील हुनुहुन्छ नै । के नेपालमा सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय सम्भव छैन ? अवश्य छ र हुनुपर्छ । अब असल शासनको वास्तविक शुरुवात् न्यायालयबाट होस् । सम्माननीय प्रधानन्याधिस श्रीमान् रामप्रसाद साहबाट होस् ।
श्रीमान् , अहिलेको डीआइजी बढुवा मुद्दा एउटा शुरुवात् बन्न सक्छ । तपाँइका उत्साहप्रद प्रतिवद्धता सुनेका हामीलाइ आशा छ : शक्तिको आडमा थोपरिएको संगठित अराजकता न्यायलयको ढोकामा आएपछि अब न्यायालयले नजीर निर्माण हुने गरी फैसला गर्नेछ ताकी कुनैपनि इमान्दार राष्ट्रसेवक नेपाली नागरिक शासकीय स्वेच्छाचारिताको शिकार हुन नपरोस् , प्राकृतिक बढुवाबाट वञ्चित गरी आफैले अन्यायमा पारेका संगठनका इमान्दार अधिकृत लाई पेलेरै सिध्याउने सोच सहित अघि बढेकाहरुको मुटुमा ढ्यांग्रो बजोस् । हामीलाई विश्वास छ – न्याय दिनुपर्छ भन्ने आदेश मान्दैनौं भन्छन् भने अदालतको मानहानी गर्ने आइजीपीको फुली फुकाल्ने अर्को आदेश हुनेछ । अब यो देशलाई यस्तो कोशेढुंगा फैसला चाहिएको छ । अदालतले आफ्नो मानहानीको सन्दर्भमा कानुनबमोजीम कडा फैसला गरी शक्तिको आडमा भएको संगठित अराजकतालाई झापड हानीदीयो भने कोही पनि कानुन भन्दा माथि छैनन् भन्ने प्रमाणित हुने थियो । तर यस्तो हुन नसके फेरी पनि शासकीय अराजकता बेलगाम हुनेछ । सर्वसाधारणको पहुँचबाट न्याय सधैंको लागि फुत्किने छ ।
श्रीमान्, हामी बाँचेको यो समयमा भ्रष्टतन्त्रमाथि लगाम चाहिएको छ । देशलाई एउटा हिरो चाहिएको छ । तपाइको जीवनमा प्राप्त यो महान् अवसर सम्पूर्ण नेपालीजनको कल्याणमा शत्प्रतिशत समर्पित होस् । श्रीमान्को कार्यकालमा साँच्चै नयाँ नेपालको बिगुल बजोस् । भ्रष्टाचार, अराजकता र कुशासनमा संविधान र कानुनबमोजिम न्यायालयबाट लगाम लागोस् । कम क्षतिमा नेपाल ‘सुशासन’को गन्तव्य तर्फ मोडियोस्, पुनः हार्दिक शुभकामना !
उमेश रुपाखेती, काठमाडौं